Abatyeleli bakho abafuni ukufunda okungakumbi okanye bafunde ngakumbi | Martech Zone
Abakhenkethi bakho abafuni ukufunda ngakumbi okanye bafunde ngakumbi
NgoLwesihlanu, Matshi 1, 2013 NgoLwesihlanu, Matshi 1, 2013 Douglas Karr
Amaxesha ngamaxesha, abathengisi baxakeke kakhulu kukufumana uninzi lwezithuthi kangangokuba abachithi xesha ekuphuculeni iipesenti zokuguqula indlela esele bezifumene. Kule veki, besiphonononga a Inkqubo ye-imeyile eyahlukeneyo umthengi weLungelo kwi-Interactive. Umthengi ubeke amaphulo amangalisayo kodwa waphathwa kukucofa amaxabiso aphantsi kunye nokuguqulwa.
Siqaphele ukuba i-imeyile nganye inezidibanisi ezifanayo ezazisetyenziselwa ukuqhuba umrhumeli abuyele kwisiza:
Andiphikisani nokusebenzisa amakhonkco okubhaliweyo anje, kodwa xa engadityaniswa nee-teasers, izibonelelo, amanqaku kunye nemvo yongxamiseko, ngekhe bafumane unqakrazo olufunayo. Khawufane ucinge ukuba la makhonkco aguqulwe aba:
Funda ukuba baphumelela njani abathengi bethu ukwanda okuphindwe kathathu kwimveliso. Qala ukubona ukwanda kwemveliso kunye neshishini lakho ngoku.
Funda indlela iqonga lethu idibanisa ngokulula kunye nezicelo zakho zangoku.
Kwimizuzu emi-2, le vidiyo imangalisayo iya kuchaza ukuba kutheni ufuna ukubhalisela namhlanje ukuya Tshintsha ubomi BAKHO.
Izihlalo ziyaphela, bhalisela idemo namhlanje kwaye fumana incwadi yethu yasimahla!
Isibonelelo kunye nemvo yongxamiseko inefuthe elibonakalayo kumaxabiso akho okucofa. Musa ukuchitha ithuba kwi-imeyile okanye kwinqaku ukuze ukonyuse ucofe amaxabiso. Abantu abafuni Funda nzulu, Funda ngokugqithisileyo, ukubukela or ukubhalisa Ngaphandle kokuba bayazi ukuba kukho isibonelelo sokwenza njalo!
Qaphela: Ungayichazanga eyokuba ukudibanisa ngaphakathi kwezo ntlobo zamagama kukusebenza ngendlela eyoyikisayo. Ukongeza ikhonkco kulwimi oluchazayo ngakumbi kulungiselela umxholo wakho ngcono kwiinjini yokukhangela.
tags: Funda nzuluikhonkco lokudibanisaFunda ngokugqithisileyojonga ngoku
Iziphumo zoPhando lweCMO
UkuThengiswa kokuSebenza ngokuZenzekelayo
Mar 2, 2013 ngo 12:41 PM
Njengoko ndifunda le posi, kukho intengiso yeMarketpath ethi "Funda ngakumbi" 🙂
Mar 3, 2013 ngo 2:46 PM
Kuyahlekisa kakhulu, @robbyslaughter:disqus ! Ngokuqinisekileyo likhona ithuba lokuphucula loo CTA. Ekuzithetheleleni kwabo, ndicinga ukuba kukho ibhenefithi enye apho – 'kulula'.